संपदकीय : किन बिक्दैनन कारागारमा निर्मित हस्तकला ? « Phidim Today
संपदकीय : किन बिक्दैनन कारागारमा निर्मित हस्तकला ?
Published on:6August, 2019 7:31 am
फिदिम बजारमा रहेको जिल्ला कारागारमा बाहिर बनाइएका भन्दा अझै सुन्दर र आकर्षक सजावट र फर्निचरका सामान निर्माण हुन्छन । तर यी समानले बजार नपाइको नौलो घटना हैन ।
बजार चौकमा खुलेका सुबिधा सम्पन्न फर्निचर उद्योगमा बनेका भन्दा गुणस्तर र आकर्षक सजावटका सामग्री, ढाका र फर्निचरका सामग्री जिल्ला कारागार पाँचथरमा निर्माण हुने भए पनि त्यसले बजार पाउन सकिरहेको छैन ।
सिप हस्तान्तरण हुँदै बर्षौदेखी बन्दै आएका सामग्री पछिल्ला बर्ष परिस्कृत बन्दै आएका छन । पहिला–पहिला सामान्य प्रकृतिका मुडा मात्रै बन्थे । पछिल्लो समय फरक फरक डिजाइनका मुडा सहित अन्य दर्जनौ सजावटका सामग्री बन्दै आएका छन् । तर तिनले बजार नपाउँदा उपहारमै सिमित बन्दै गएका छन । उपहार दिनेलिने बाहेका ब्यवसायीक रुपमा तिनको बिक्रि छैन ।
कारागार पुग्दा शिप नभएकाहरु पनि त्यही सिकेको शिपबाट मनग्य काम गर्न सक्ने भए पनि श्रमको उचित मुल्य पाएका छैनन् । कारागारमा ७० भन्दा बढीले फर्निचर सहितका सजावटका समग्री बनाउने काम गर्छन । मुडा बाहेक बाहिर बजारमा बेचेर पैसा लिने कैदि बन्दी भने धेरै छैनन् ।
कारागारमा मासिक ५ सय भन्दा बढी मुढा उत्पादन गर्न सक्ने जनशक्ति अहिले पनि क्रियाशिल छ । तर बजार अभावका कारण बढीमा एक सयवटा मुढा बेचेर बस्नु परेको उनीहरुले गुनासो छ । यहाँ उत्पादन भए जति सबै बिक्रि हुनेगरी बजार छैन् । एउटा मुढाको दाम होलसेलमा ३ सय ५० देखी ४ सय रुपैया सम्म पर्छ । त्यो साधारण प्रकारको मुडाका लागि हो । बिशेष प्रकारको टेवल आकारमा बनाइएका मुडाहरुलाई साइज र बनावट हेरेर दाम पर्ने गरेको छ । बजार राम्रो हुने हो भने आम्दानी पनि राम्रो हुने कैदिबन्दीको भनाई छ ।
समान बने पनि त्यहाँ प्रयोग हुने श्रमको उचित मुल्याङकन भएको छैन । श्रमको सम्मान समेत हुन नसकेको देखिन्छ । बिकसित परिस्थितिमा श्रमको सम्मान मुलभुत बिषय हो । कारागारलाई सुधार गृहका रुपमा बिकास गर्नेहो भने यस्ता बिषयमा राज्यले ध्यान पुर्याउनु पर्दैन ?